Okungapheli: Kuthuthukisa amafonti ku-Debian | Kusuka kuLinux
Okungapheli: Thuthukisa amafonti ku-Debian
Umhlahlandlela engiwukhombisa ngezansi ukujwayela okwangempela esingakwenza funda lapha, lapho isibonisa khona ukuthi singawenza kanjani amaphakheji (.deb) azosivumela ukuthi sithuthukise ukunikezwa nokubukeka kwemithombo ku I-Debian GNU / Linux.
Izinyathelo ezingezansi zivivinywe ngempumelelo kuma-Debian Wheezy 64 Bits
$ sudo apt ukufaka build-essential docbook-to-man libx11-dev x11proto-core-dev libz-dev quilt debhelper pdebuild-cross
Lokhu kuzofaka amaphakheji amaningi, kepha lutho, lapho siqeda singakwazi ukuwakhipha futhi. Uma konke sekufakiwe, sifaka i-git-core:
$ sudo apt ukufaka git-core
Lapho siqeda ngakho konke lokhu, esigungwini sifaka:
Esikwenzayo dpkg-checkbuilddeps ukuqinisekisa ukuthi asikutholi ukuncika. Uma konke kujwayelekile, siya esigabeni esilandelayo:
Le mibhalo elanda amaphakheji angekho ngaphezu kwe-2MB futhi ayithathi isikhathi eside ukusebenza. Lapho beqeda, sizobe sesenze ama-.debs adingekayo, esiwafaka nge:
Futhi yilokho kuphela. Siqala kabusha futhi lapho siphinda sifinyelela futhi sizobona izinguquko.
Ngokudabukisayo angizange ngithathe izithombe-skrini ngaphambi kokwenza lokhu ngakho angikwazi ukukhombisa umehluko, kepha ngithembele amafonti weChromium ahlala eyihlazo manje abukeka emahle kakhulu.
Ngoba noma ngubani usebenzisa Ama-Debian Wheezy 64 Amabhithi futhi angifuni ukuchitha wonke lo msebenzi, ngishiya owami .debs 😛
Landa ama-.debs we-amd64
Ukuvuselelwa: Siyabonga ku- elindokuhle singabona ngaphambi nangemva kwalokho:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Okungapheli: Thuthukisa amafonti ku-Debian
kuhle kakhulu, kepha akukho ngaphambi nangemva kwesikrini semithombo?
Ngeshwa akunjalo .. Nokho uma u-elendilnarsil enza konke kahle, singasebenzisa isibonelo sakho kokuthunyelwe .. Ngakwesokudla elendilnarsil?
I-XDD, kuze kube manje ngiyakubona ukuphawula. Kunjalo!
NGIYABONGA GENIUSES !!!!!!
Sawubona, bengifuna ukwazi ukuthi ifolda (ecindezelwe ngokusobala) ye-Debian-Packages inganikezwa yini ukulanda ngoba abanye bethu abakwazi ukufinyelela i-git repository ngemuva kommeleli futhi asisebenzi ngamabhithi angama-64. Ngiyabonga kusengaphambili. Ozithobayo.
Njengamanje ngiyinkimbinkimbi ngandlela thile, kepha ngokuhamba kwesikhathi ngizolayisha ifolda noma uma ngikwazi, ngizoyithumela kukheli le-imeyili obukade uphawula ngalo.
Ukuhlola, ngizophawula futhi ngilayishe izithombe.
Unginike isexwayiso wangangivumela ukuthi ngiqhubeke: "dpkg-checkbuilddeps: build dependencies not satisfied: dockbook-to-man"
Ngivele ngenza inqubo yokufaka futhi lelo phakheji (i-docbook-to-man) alikho.
Iphutha lami. Ukuthi ngiyikopishe ngokungalungile ku-athikili, uma kunjalo, kodwa ibhalwe kabi .. Manje ngiyayilungisa. Iphakethe liyi-docbook-to-man.
Landa ama-debs akho futhi iqiniso ukuthi imithombo ingcono, yize kwasekuqaleni bekufanele ngiphinde ngiyilungise. Manje konke kuphelele futhi kungu-100
Njengokuthi uphinde wahlela kabusha?
Kuzintandokazi zohlelo lwe-Kde, ngoba bekubukeka kumangaza kancane
Kunencazelo engcono yemithombo, futhi bazizwa begcwele ngokwengeziwe. Yize bekufanele ngiqale kabusha uhlelo okwesibili, ngoba kuhambe kancane.
Ngendlela u-Elav, kuthiwani ngakho konke okungakhishwa?
Ngicabanga ukuthi ukusula i-.deb efanayo ukuthi uyibuyisele endaweni yayo
Ngabe kuzoba yifolda ye-Debian-Packages, etholakala kufolda Yomuntu?
Ah, kahle uma usudale i-.deb yakho, ungasusa yonke ifolda uma ufuna .. Lokho akunqumi lutho.
Ngisanda kufaka ifayela le-. Futhi ngaphandle kokufaka noma yini, ifayela lombhalo nje
I-elav manje uthi awuboni mehluko ngoba nalokhu kungapheli kungaba ngotshani bokugcina.
http://www.infinality.net/blog/infinality-repository/ <- i-repo yabangane bami be-Fedorian
uyabonga, ngoba umsulwa .deb .deb .deb nokuningi .deb.
e-Arch nakokuphuma kukho futhi: http://deblinux.wordpress.com/2013/03/02/tip-mejora-y-mucho-el-renderizado-de-fuentes-en-manjaro-linux/
Icebo elihle, kepha ngithanda amafonti enginawo ngokuzenzakalela (okungenani angcono kune-TrueType iWindows enayo futhi awakwazi nokuphumelela ukufundeka).
Kufakiwe .deb (yebo ngiyivila XD). Kubukeka kangcono impela, ngiyabonga ngokufaka.
Ngikuhlolile kuDebian Wheezy x86 kukhompuyutha ephathekayo enesikrini esincane samasentimitha ambalwa, futhi iqiniso ukuthi bekubukeka kubi kakhulu ngemithombo engapheli kunaleyo eza ngokuzenzakalela, ngakho-ke bekufanele ngikhiphe amaphakheji ukuze konke kuzobuyela kwesijwayelekile. Ngicabanga ukuthi kuya ngeqembu okukhulunywa ngalo ukuthi libukeka kangcono noma libi kakhulu.
Ngiphawula ngivela kumawindi 7 futhi ukunikela kwami ​​kuhle kakhulu 😛
hehe! .. Lol .. Ummm .. Ngingathanda ifonti ye-Apple kakhulu noma ifonti ye-Ubuntu People 😛
Ukungapheli kungcono kakhulu.
Into enelukuluku engiyibonile kuze kube namuhla: ibha yemenyu yeLibreOffice ibonakale inkulu. Kodwa ukuyilungisa kwakulula.
Ngendlela u-Elav, ngicabanga ukuthi ngenxa yezinguquko abazenzayo kubhulogi, ideskithophu ayisabonwa.
Benginganakile nokuqaphela. Kuzofanele ngibuze i-KZKG ^ Gaara.
Ushintsho olukhulu, lubukeka lungcono kakhulu manje. ngibona kakhulu.
Ngokubona kwami, okungenani ku-Debian, akudingekile. Nginokufundisa okugcwele ngale ndaba futhi kufinyelela okufanayo ngaphandle kokungeza amaphakheji wangaphandle noma ama-repos. Ikakhulukazi uma kuyi-Chrome / ium.
Ku-debian angicabangi ukuthi kunesidingo sokusebenzisa le thiphu, leyo eza ngokuzenzakalela ayingikhathazi. Ku-archlinux uma ngifaka isandla emithonjeni ..
Usuku oluhle ..
Ngivumelana nawe, yize i-Arch kufanele ibe nesifaki esifana naleso se-OpenBSD (kuze kube manje, isifaki esisizwe kangcono engisisebenzise kuze kube manje).
Abasebenzisi be-Iceweasel bebona ukuthi iqanda lephasika "mayelana: ne-iceweasel" alisatholakali ku-3, 2, 1 ...
[/ Off Isihloko]
Ake sizame, sibone ukuthi babukeka kanjani… .sibonga kusengaphambili
Ngiyisebenzise kuSlackware ... izinhlamvu zibukeka zizinhle kakhulu.
I-XFCE iyesabeka, kepha ngamahora ambalwa wokuyihambisa futhi sengeze i-Infinality kuyo, singakhipha okuthile okuhle, okufana nalokhu:
Ungalanda kanjani uchungechunge usebenzisa i-flexget